काँग्रेसले टुंगो लगायो समानुपातिक सूची, को–को परे ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Headline2 Main News National राजनीति काँग्रेसले टुंगो लगायो समानुपातिक सूची, को–को परे ?
काँग्रेसले टुंगो लगायो समानुपातिक सूची, को–को परे ?
काठमाडौँ, २९ माघ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको स्थानअनुसार नामावली टुंगो लगाई निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले समानुपातिक स्थानको नामावली टुंगो लगाएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए ।
समानुपातिक सूचीमा खसरआर्य (पुरुष) तर्फ बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी र मोहन पाण्डे चयन भएका छन् । त्यस्तै खसरआर्य (महिला) तर्फ सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, डा.डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी र दीपशिखा शर्मा रहेका छन् ।
आदिवासीरजनजाति (पुरुष) तर्फ बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ, जिपछिरिङ लामा र दिव्यमणि राजभण्डारी चयन भएको सचिव रिजालले राससलाई बताए । आदिवासीरजनजाति (महिला) तर्फ ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, हीरा गुरुङ र मीना सुब्बा रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फ नेकपा (एमाले) ले ४१, नेपाली काँग्रेसले ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १७ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छरछ स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा (तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत समेत) गठन हुने प्रावधान छ ।